ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်ခြင်း – Be Safe at Home | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်ခြင်း – Be Safe at Home	43
Posted by ဇီဇီ on Sep 18, 2015 in Arts & Humanities, Cultures, How To.., Know-How, DIY, Society & Lifestyle, Think Tank | 43 comments
လမ်းမှာလည်း လမ်းမှာမို့ ခိုးမှု လူယက်မှု အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေတယ်။
ကိုယ့်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစိုးရနဲ့ ဥပဒေ မရှိတာမို့ (ရှိပြီး သုံးစားမရ) ကာကွယ်နည်းတွေ လိုက်ရှာနေတယ်။
ပထမဆုံး အိမ် တစ်အိမ် အတွက် ကာကွယ်နည်းတွေ ပြောပါမယ်…
သိပြီးသားတွေပါ၊ သတိမမူမိတာ၊ မအားလို့ အချိန်ပေးမလုပ်နိုင်တာတွေ ရှိတာမို့ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ကာကွယ်မှ ရတော့မှာမို့ အားစိုက်ပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ???
၁) ခြံ တံခါး၊ အိမ်မကြီးတံခါးအပြင် ကိုယ့် အခန်းကို ကိုယ် သစ်သား တံခါးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ သော့စံနစ်၊ ဂျက် စတာတို့နဲ့ တပ်ဆင်ထားပြီး ကာကွယ်ပါ။
(အရေးဟယ်အကြောင်းဟယ် အိမ်တံခါးမကြီးက ဝင်လာနိုင်ရင်တောင် ကိုယ့် အခန်းလေးထဲဝင်ပြီး လုံခြုံနိုင်ဖို့ပါ)
၂) ဖုန်းကို အမြဲတမ်း အားရှိနေပါစေ။
(အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ် ကိုယ့်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ သူမျိုးကို လှမ်းခေါ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိနေအောင်ပါ)
၃) အခန်း တစ်ခုမှာတော့ အမြဲမီးလင်းနေပါစေ
(တစ်ယောက်ယောက်က မအိပ်သေးဘူးလို့ ထင်နေအောင်ပါ။ တစ်အိမ်လုံး မီးမှောင်နေတာထက် အခြေအနေကောင်းအောင်ပါ။
(ကိုယ့် အိမ် အခြေအနေ၊ ကိုယ့်အိမ်အသွားအလာ ကို အပြင်ကနေ တိုးလျှိုပေါက် မမြင်နိုင်ပါ)
၅) အိမ်နားမှာ ခြုံတွေ မထူထပ်နေပါစေနဲ့။
(ပုံးခိုလို့ ကောင်းမဲ့ နေရာမျိုး ကို ကိုယ့်အိမ်နားမှာ မဖန်တီးမိအောင်ပါ)
၆) အိမ်အပြင်ပတ်လည်မှာ အလင်းရောင်/မီး ကောင်းမွန်နေပါစေ
(ကိုယ့်အိမ်နား လူ အသွားအလာ၊ ခိုးလုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေ ကိုယ့်အိမ်နားမှာ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့)
၇) ညဘက် အိပ်ရင် တံခါးအားလုံးနဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ သေချာစွာပိတ်နေပါစေ
(အိပ်ခါနီးတိုင်း စစ်သင့်ပါတယ်။ သံပန်းမရှိတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ဒီတိုင်းဖွင့်မထားသင့်ပါဘူး)
၈) ကိုယ့်အိမ်ကို အချိန်မဟုတ်လာထိပါးတဲ့ အခါ Alarm တွေ မြည်အောင် စီစဉ်ထားပါ။
(ဒါကတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ အိမ်တွေမှာအပိုပြုလုပ်ထားသင့်တဲ့ အရာမျိုးပါ။)
ဘယ်အချိန်မဆို ဘယ်သူလာလာ တံခါးကို အရင် မဖွင့်ပါနဲ့။
တံခါး ၂ ထပ်ရှိရင် သံပန်း တံခါးကို အမြဲပိတ်ထားပြီး သစ်သား တံခါးမှ စကားပြောပါ။
လူစိမ်းတစ်ယောက် လှမ်းဆွဲနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးထက် ခွါရပ်ပြီး မေးမြန်းပါ။
ကိုယ့်စိတ်မသန့်ပဲ အားနာမှုနဲ့ အိမ်ထဲ အဝင်မခံပါနဲ့။
အိမ်ထဲမှာ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မဲ့ လက်နက်/တုတ်/ဂေါက်ရိုက်တံ/လက်နှိပ်ဓာတ်မီးအကြီး စသည်ဖြင့်ထားရှိပါ။
အိမ်မှာ ရိက္ခာခြောက်များထားရှိပါ။ (ညနေဘက်၊ ညဘက် ဗိုက်ဆာလို့ အပြင်ထွက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင်ပါ)
အလှူခံဖြစ်စေ၊ ဘုန်းကြီး တစ်စိမ်းဖြစ်စေ ဒီ ခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံရပါဘူးးး
ခေတ်မကောင်းလို့ ဘယ်သူ့မှ မယုံလို့ တံခါးဖွင့်မပေးတာ စိတ်ဆိုးတတ်ရင်လည်း အဲလို မိတ်ဆွေမျိုးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။
နောက် တစ်ပတ်မှ လမ်းသွားရင်း အကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်လို ကာကွယ်ထားရမလဲ ရေးပါမယ်။
mgsai says: သြော် ဒီစာဖတ်လိုက်ရတော့မှ ကိုယ့်အိမ်က အကုန်ပြည့်စုံနေတာပဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ကဲ့။
Mike says: .ကောင်းပါလေ့….ကောင်းသောအကြံပြုချက်တွေပါပဲ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ် ဦးမိုက်။
သူတို့ကတော့ မဆူဆူအောင် ညစ်မှာပဲလေ။
ဒီကြားထဲ ကိုယ်တွေက သားကောင် ဖြစ်မသွားဖို့ပဲ အရေးကြီးပါရဲ့။
Mr. MarGa says: တစ်ခုမှကို လုပ်မထားတာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖုန်းလေးဆက်ပြီး သတိပေးလိုက်ဦးလေ
Mr. MarGa says: လူကိုယ်တိုင်ပဲ ပြောတော့မယ်….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အင်းးးး
@QUIL@ says: ကောင်းသဗျ….
ကျုပ် သွားလည်ဖူးတဲ့ ဂငယ်တွေအိမ်တိုင်းမှာ အဲ့ဒါတွေ ရှိတယ်…
(စင်ကားပူလည်း ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်လေတော့ အလားတူတွေ ရှိမပေါ့လေ)
ကျုပ်တို့ ကျွန်းဆွယ် နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း မပေါ့သင့်ဘူး။ အမှန်ပါ…။
အနည်းဆုံး မီးခြစ် သော်လည်းကောင်း ဓာတ်မီးသော်လည်းကောင်း ရှိသင့်ရဲ့။
နောက်ပြီး သောက်စရာ ရေ…။ ရေသန့် မာကတ္တာတွေ ကျေးဇူးနဲ့ ကျုပ်တို့ ရေကျိုမသောက်ကြတာ ကြာဘီ။ (မြို့ပြလူတန်းစား)
တနည်းပြောရရင် အ၀ိဇိတွင်းရေဆိုတာ မီးလာမလာ ဆိုတဲ့ အီးပီစီကို မှီခိုနေရတာက တပိုင်းဗျ… ဒါကို နာဂစ်မှာ ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာ ရဖူးရဲ့…. မေ့နေကြသူတွေအတွက် remind လုပ်ပါတယ်…
ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်မယ်… ဆူမယ်ဟေ့ ..လှုပ်မယ်ဟေ့ ဆို ထိပ်ဆုံး ဆန်ဈေးတက်ပါတယ်… (၀ယ်လိုအားများလာသကိုး)
ကိုညီထွဋ် တော်ကီငှားပြောရရင် လူတွေ … လူတွေ… ပေါ့…
ခက်တာ သူတို့ မတွေးတာက … ရေမရှိရင် ဘာနဲ့ အနှီဆန်ကို သွားချက်မလဲဆိုတာ…
ကျုပ်တို့ မြစ်တွေပေါတဲ့ ရေချို အရင်းအမြစ် အလွန်ကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်နော…
(ဂျပန်လို စင်္ကာပူလိုမဟုတ်သေး) .. ဒါတောင် အခက်အခဲ ရှိနေတာ..
ဆိုတော့… ကျုပ်သဘောအရ ..မြို့နယ်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ
အရေးပေါ် မြေအောက်ရေ ငုတ်တိုင်တို့ … မီးသတ်ရေငုတ်တို့ လိုအပ်တယ် ဖြည့်စည်းရမယ်မြင်မိတယ်…။
လော့ဒ် ဘုဒ္ဒတို့ ..ဂျီးဇက်စ် ဆို့ အလ္လာတို့ က ကောင်းကင်ဘုံမှာ ၀ိုင်းခြင်း ခတ်နေကြမှာဗျ…။
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမှာ….။ ကိုင်း…ပြော… ခညာ့ရပ်ကွက်ထဲမယ်..မီးသတ်ရေငုတ် ဘယ်နှခု ရှိသတုန်း..။
(သူများ လျောက်မေးနေတယ်.. ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြေပါ့မယ် ကျုပ်ရပ်ကွက်ကတော့… မီးသတ်ရေငုတ် ဝေးစွ ရွှေပြည့်နေတဲ့ ဘုရား
ထပ်ပြီးရွှေကပ်ဖို့ အသင်းပဲ ရှိတယ်..)
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက်မှာချင်တာက
၈၈ တုန်းကလို ဂိုထောင်တွေ ဖောက်ပေးရင် သွားမယူကြဖို့ပါပဲ။
@QUIL@ says: ဂိုထောင်ဖောက်တဲ့ …
တနည်း… ငတ်လို့ ရွေးစရာမရှိတဲ့ …လူတန်းစား အတွက်လား…??
ကြုံလို့ လုပ်တဲ့ အဖော်ကောင်းလို့ လုပ်တဲ့ ..ဂေါ်ချင်တဲ့ လူတန်းစားအတွက်ရော??
(ကျုပ် အင်ဂလိကန်ကရတဲ့ စာတန်းလေးတခု စောင့်ပြီးမျှော်နေပါတယ်)
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြုံလို့ အဟွာယားတဲ့ အမှုတွေတော့ ဘာသီဝရီမှ ကို မရှိတာ။
@QUIL@ says: အဟွာ ယားဖူးတဲ့ လူတန်းစား နဲ့ … ဘ၀ရင်းပြီး ပေးဆပ်ဖူးတဲ့ လူတန်းစား
အတူတကွ သူရဲကောင်းဘွဲ့ခံတဲ့ ခေတ်ဆိုရင်ကော..
ဘ၀ မရင်းရဲလို့… လှုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့ခေတ်မှာ ရူးချင်ယောင်ဆာင်နေပြီး
လှုပ်ရပြီဆိုတော့မှ လှုပ်ပြပြီး ငဒို့သာ သယဲဂေါင်း ဘွဲ့ခံနေသူတပိုင်း…
ဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘု.. သို့သော် တသက်လုံး ယုံကြည်ရာကို ဘာသာရေးလိုကိုးကွယ်ခဲ့ပေမယ့်
ယနေ့ခေတ်မယ် ဘာကောင်မှမဟုတ်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဂျောင်ထိုး ခံထိသူတွေက တသွယ်…
ပြောဖူးတာ ထပ်ပြောမယ်… လူ၆သန်း ကို ဆဲဆိုပညာပြသိမ်းသွင်းနေတာ ကိုဘာသာရေးမှတ်ရင်တော့ တပိုင်းပေါ့…
ကျုပ် နည်းနည်း ဒေါသထွက်နေတယ်…..
ရယက တိုင်ပီး စည်ပင်ကို ကားဆွဲခိုင်းလိုက်တယ်…
မဟုတ်တာပြောရင် သမုဒ္ဒရာမြော ကြလိမ့်မဲ့…
ရယက သော်လည်းကောင်း မယကသော်လည်းကောင်း ကို နင်ပဲငဆ ခွန်းတုန့်ပြန်ဖူးသဒုံး…
ကျန်တာနောက်မှလှုပ် … အဲ့လာအရင်လှုပ်…
မိသဘော … မိသဘော…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခုဟာက ရယကကို အော်စရာမလိုတဲ့ စံနစ် တစ်ခု
လမ်း တစ်လမ်းကို သွားဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းလေအေ။
ဂီ မမှီတောင် ဂီ ရဲ့ မြေးလေး မီလိုမီငြားးး
@QUIL@ says: အသက် တအားထွားနေတဲ့ ပျံလွန်တော်မူကာနီး ခေါင်းဆောင်လား..
သူ့ခေတ်လွန်ကာလ ..ဘယ်သူ့ ဘလက်ဇင် နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမယ်မှန်းမသိတဲ့…
အနာဂါတ်မရှိတဲ့ အဖွဲ့လား.. (ဒါတောင် အခြမ်းခြမ်းကွဲမှာ ထည့်မပြောသေး)
နောက်လိုက်ကို ချေးများတယ် ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးပါ… ပြောတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ ..ဆပ္ပတိန်းဇေဘယ်လတီ ပဲမေးပါ့မယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဆို အနာဂတ်ဂေါင်းးဆောင်တွေ ကို စက်နဲ့ လှည့်ထုတ်ပေးးသလို ထုတ်နေတဲ့ စစ်ကျောင်းး ပိုင်ရှင်ကြီးးတွေ ကို ပဲ ပေးးပေါ့ ဟိဟိ
ထင်သာမြင်သာ တိုးးတက်မှု ပိုင်ရှင်တွေ ကိုမှ ဂီ စိတ်အေးးရတော့ မှာ ..
ဂျက်စပဲရိုး says: နံပတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇ ရှိတယ်
နံပတ် ၄ ကတော့ ခြံထဲ ကို တော်ရုံ မမြင်ရဘူး ဆိုတော့ တယ် မထူးပါဘူး။
ခွေး ၂ ကောင် မွေးထားတယ် ငိငိငိး)
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးး
ခွေးမွေးလို့ မနိုင်ရင် မြွေပါမွေးခိုင်းရတော့မလားမသိတော့။
မဟန်ရင် ပေါက်တော့ ဆိုပြီးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: ခွေး တွေတော့ ဘယ်လောက် အားကိုးရမယ် မသိသေးဘူး။
အိမ်ကို လူစိမ်း လာတာ ရှားလို့
မှန်ထဲက သူတို့ အရိပ် ကိုတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ ပြန်ဟောင်နေကြတာပဲ။း)
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိ ဟာက ခွေးခွေးချင်းဟောင်ပြီး လူကျမှ လွှတ်ပေးနေအူးမယ်အေ
ဂျက်စပဲရိုး says: အချင်းချင်း က တော့ တီးသဗျ။
ဟိုတလော က လဲ ၂ ကောင် သား ကိုက်ကြတာ
တစ်ကောင် ပြဲကွဲ ပြီး သွေးစက်စက်ယို ဖြစ်လို့ အဖေ ဆေးထည့်ပေးလိုက်ရသေး တဲ့။
Crystalline says: ကွာလတီမြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အထဲပါတဲ့ Solex သော့ကို.. သော့သမားဖျက်ပေးတာ ၂မိနစ်မကြာဘူး.. အိမ်နဲ့မနီးမဝေးလမ်းက…၆လွာကို..တိုက်၂လုံးကြားကခြေကန်တက်ပြီးခိုးသတဲ့… အဲ့လိုစွမ်းရည်တွေရှိရက်..အလုပ်မလုပ်စားဘဲခိုးစားတာ.. အမှုဟောင်းပေါင်းကမနည်း ကိုယ့်အိမ် သံပန်းအခိုင်အမာရှိလို့စိတ်နည်းနည်းအေးနေတုန်း… တန့်ဆည်က ရွှေဆိုင်တစ်ခုအဖောက်ခံရပြီး.. သိန်း၈ထောင်ဖိုးပါသွားသတဲ့.. သံပန်းအမာကြီးကိုညှပ်ကွေးပြီးဝင်သွားတာ… ကိရိယာတွေတောင်ထားခဲ့သေး..ရိုက်လည်းပြသေးတယ်.. တချို့တောင်. အိုင်ဒီယာရမယ်..
စိတ်သက်သာအောင်ဖြေတွေး… ရွှေဆိုင်မို့ အဲ့လောက်အပင်ပန်းခံတာနေမှာပါလို့… လူစိမ်းပေးဝင်ဖို့မပြောနဲ့… လူကျက်တောင် ပျင်းတဲ့အချိန်ဆို
တံခါးထဖွင့်တာမဟုတ်… မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် အခုနောက်ပိုင်း.. ဘုရားပဲအပ်ထားတယ်.. ကိုယ်ကလည်း…အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲနေရတာများတယ်.. တခါတလေလည်း..
.တစ်ညလုံးနိုးနိုးကြားကြား..နေ့လည်မှ အချိန်ရရင်ပြန်အိပ်.. Golf swing ကျင့်တဲ့တုတ်တွေ… driver တွေတော့ အိပ်ယာနားတန်းစီထောင်ထားတာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျင်စက်တို့ ဘာတို့ပါဝယ်ထားး။၊
ဝက်ဆိုက် တစ်ခုကတော့ ဒီ လိုမှာထားတယ်။
လုံခြုံတဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲ ကို ရိက္ခာနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယ အပြည့်အစုံထည့်ထားတဲ့။
Panic room ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ရှာကြည့်
အောင် မိုးသူ says: ငိုပြီလေ။ အိမ်က ခြံတံခါးက ဂျလက်မပြောနဲ့ ကြိုးလေးနဲ့စွပ်ရတာ ခွေးဝင်တိုးရင်တောင် ပွင့်တယ်။ အိမ်မကြီးတံခါးလား ဂျလက်တောင်မရှိဘူး ဒီအတိုင်း ပတ္တာလေးနဲ့ စေ့ထားတာ။ ညဘက်အိပ်လည်း အဲ့အတိုင်းပဲ စက်ဘီးလည်း ဒီအတိုင်းအိမ်ရှေ့မှာထားတာ။ ဟိဟိ ။
လူကို မထိခိုက်ဖို့ အရေးကြီးတာ။
ဒီခေတ်က လူ့ အသက်က တန်ဖိုးအမဲ့ဆုံး ခေတ်
ဂျက်စပဲရိုး says: ပစ္စည်းပဲ လိုချင်တာပါဆို..
လူက ဘာလုပ်ဖို့တုန်း :P :P :P
ပစ္စည်းလိုချင်လို့ လူကို ထိခိုက်မှာတို့ကို ပြောတာပါအေ။
အောင် မိုးသူ says: ပြောရရင် မကြီးရေ အိမ်မှာ တန်ဘိုးကြီးတာဆိုလို့ မရှိဘူးရယ် ဟိဟိ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: လူရဲ့ တန်ဖိုးးက အကြီးးဆုံးးလေ Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ပြောပြန်ရင်လည်း ဖွတ်လော်ဘီ ဒဇိပ်တပ်ခံရအုံးမယ်…
စဉ်ဆက်မပြတ် မျိုးဆက် ထုတ်လုပ်မှုပညာရပ်မှာ …
ဒေါင်းတွေ ဖွတ်တွေဆီမှာ ဒဗဲ့ ခံကြ ….
သူရို့မယ် အဆင့်တိုင်းအတွက် ကန်ဒီတိတ်တွေ အသင့်ရှိရဲ့…
(ကျုပ်ကိုကြည်ညိုသူများ ဖြစ်စေ အတုယူစေချင်လို့ ပြောတာပဲလေ ဖြစ်စေ …ဆိုပြီး ခရက်ဒစ်ပေးကြစေကုန်)
အန်ဒီစီ တို့ ဥစတ တို့ အလကား ထားတာမဟုတ်…။
ဓာတ်တိုင် ဖက်တက်တာတို့ စိတ်နောက်သွားတာတို့ က ပုံပြင်မဟုတ်။
ဆက်ပြောရရင် နှစ်၃၀လောက် သည်အဆင့်ထိလောက် တက်လှမ်းလာတာ ဖားတာသက်သက်နဲ့တော့ ညာစားမရစကောင်း။
ပါဆင်နယ် ရီပို့ကတ်တွေ ရှိပြီးသား။ အဲ့ဒါတွေရဲ့ အစွန်းတွေ မထွက်စကောင်း..။
သည်ဘက်က ချပြတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိ ဘယ်ဝါမှန်းမသိ.. အဲ့ဒါမျိုးတွေ တင်းကြမ်း..
ပြတာ ၂ခု ပဲ မြင်မိရဲ့ … တခုက ငယ်တာ(ဒါမှမဟုတ် တချို့လည်း လှတာ ဆိုပါစို့) နောက်တခုက ပညာတတ်တာ…။
စပြီးနောက်ပြီး တခွန်းပြောဖူးတယ်… ။ အနှီ ငတိတချို့ရဲ့ လုပ်သက်က ခညားတို့ ကျုပ်တို့ သိပ်ချစ်တဲ့ ဘူးလက်ရဲ့ စစ်သက်အစွန်းထွက်တောင် မရှိဘူးလို့..။
ပြီးတော့ သူတို့မှာ ရီပိုဒ့်ကတ်လည်း မရှိဘူးလေ…။ ကောင်းချင်တဲ့လူကောင်းမယ် ဆိုးချင်တဲ့လူဆိုးမယ်..။မပြောနိုင်ဘူး။
လူကိုမကြည့်နဲ့ ပါတီကို ကြည့် … ပြောတယ်နော်…
ဟုတ်ကဲ့ ပါတီကို ကြည့်ပြန်တော့ …ထိပ်ဆုံးလူကိုပဲ တည်ပြီး
လှုပ်နေရတဲ့ ငှက်ပျောသီး ပမာ…
အဲ့လူမရှိရင် ဘာဆက်လုပ်မတုန်း… မေးမရ … ဘယ်သူက နောက်ဂျန်နရေးရှင်းအတွက် လီဒါလဲ မသိရ…
အဲ့လူ လုပ်တာရော အကုန်မှန်ရဲ့လား ဝေဖန်မလား … ဝေဖန်မရ…။
ဒီနိုင်ငံသား မဟုတ်လို့ပဲ ထားပါတော့ဗျာ….
ကျုပ်ကို ဖွတ်လော်ဘီ လို့ စွတ်စွဲချင်သူတေ ရပ်တန်းက ရပ်အောင် ပြောပြတာပါ..
ကျုပ်မှာ မဲပေးခွင့်မရှိ…။ အကျုံးမ၀င်ဘူး..။
သို့သော် .. ကျုပ်မှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ ကိုတော့… ထင်ရာမြင်ကြောင်း ပြောခွင့် ရှိသေးရဲ့…။
ဟိတ် စပိခ်ျ မဟုတ် ခရင်မင်နယ်ကေ့စ်မဟုတ်…။
မြင်သမျှ အတော်များများသော အွန်လိုင်းယူဇာတွေက …ဒေါင်းဆိုမှဒေါင်းပဲ…
ပမာဏတခုတော့ ဖွတ် ပါမပေါ့…။
အဲ့ဒါ အချင်းချင်း ဆဲဆိုနေဖို့ လိုသလား…?
သေချာတာ ထပ်ပြောရင် ဘယ်အစိုးရတက်တက် လက်တလောတော့
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၁၄ခု တော့ မကွဲသေးဘူးမလား..
ဒါမှမဟုတ် ငကိုမဲမထည့်တဲ့ ဘယ် ဖန်မလီတော့ ဒုက္ခရောက်စေသတည်းလို့တော့ အသစ်ဖြစ်လာလတ္တံ့သော
အစိုးရက ကျိန်စာမတိုက်ဘူးမလား…. အနည်းဆုံးတော့ ဒီလောက်အဆင့် အွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့ယူဇာတွေ သိရှိနားလည်လက်ခံပြီးမင့်ကို…
မဒေါင်းရင်ပဲ အမေနှမ မနေရအောင် နိုင်ငံရေးသုတေသီလိုလို လော်ဘီအစွန်းရောက်လိုလို
ဆရာလုပ် ပညာပြ ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်း လက်ပန်းပေါင်းခတ်တဲ့ စာတွေပဲ ကြည့်မရတာ…
ခညားတို့ ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းနေလို့ကော အော်ပီနီယန်မ် ပြောင်းမယ်ထင်သလား..
အဲ့လို ဆဲလိုက်ရမှ ဂုဏ်ရှိတယ် ထင်သလား.. တာဝန်ကျေတယ် မှတ်သလား..
ရိုးရိုးလေးပြောရရင် … ဖေ့စ်ဘုတ်ကာ ၆သန်းရှိတယ်..
ခညားလည်း သုံးသလို ကျုပ်လည်း သုံးတယ်..
ခညားဖတ်သလောက်တော့ ..(ခြားနားတဲ့ မီဒီယာပဲဖြစ်စေ) ကျုပ်လည်း ဖတ်မိမယ်…
ဒါဆို ခညား ကျုပ်ကို ဘာကြောင့် ဆရာလာလုပ်နေသလဲ…
အနှီမေးခွန်းကို … ဖဘ မှာ အချိန်တိုင်းမေးဖြစ်တယ်….။ ခနတိုင်းပဲ…။
သန်း ၅၀ကျော် တားကတ်ထိချင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ပါတီခေါင်းဆောင်သိတယ်…။
မသိတာက အွန်လိုင်း လော်ဘီယစ်စ်တွေ …။
အခု အွန်လိုင်းမှာ… ရဲရဲတောက်နေသူတွေ ဘယ်ခေတ်က ဘာလုပ်ခဲ့သတုံးမေးရင် ဖြေစရာမရှိဘူး။
ရဲရဲတောက်တွေ အွန်လိုင်းဆိုတာကြီးမှာ လှုပ်ခွင့်မရသေး မကြုံသေးတဲ့ခေတ်မယ် အများစုက
ကိုယ့်ဘ၀ သင်ခန်းစာကိုယ် ကျေညက်အောင် လုပ်နေတုန်း…။
မပစ်တော့ဘု မကန့်တော့ဘု မသမတော့ဘု ဆိုတဲ့ခေတ်ကျမှ များလိုက်တဲ့ သရဲဂေါင်းတွေ။
ပိုဆိုးတာက အနှီ ရင်းခဲ့ဘူးသူတွေ ကျောကိုနင်းပြီး ခုချိန်မှ လူလုံးပြချင်သူတွေ..
ကွန်မြူနစ် အလိုတော်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ဖောက်ပြန်တဲ့လူတန်းစားပေါ့…
ပြီးတော့ ပိုမသိတာက … ပညတ် နဲ့ ပရမတ်မကွဲတာ…။
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက … ကြောက်လို့ထည့်တဲ့မဲ တပြားမှ မလိုချင်ပါဘူးပြောတယ်…။
လော်ဘီတွေက … စစ်ဖိနပ်အောက် မနေချင်ရင် ငါတို့ကို ရွေးကြ ..ဆိုတဲ့ အင်းမေ့ခ်ျ နဲ့ သွားတယ်။
စမတ်ဖြစ်သူတွေ အကုန် ငါတို့ ကို ရွေးကြတယ်ဆိုတာမျိုး အပေါ်စီး လေ နဲ့ ပြောချင်ကြတယ်…။
အပေါ်မှာပြောပြီးပါပကော… ခညားသိသလောက် တော့ အသာလေး ကျုပ် သိတယ် ဆိုတဲ့ အထှာကတော့ ..
ဖေ့စဘုတ်ကာခေတ်မယ်…. အနှီတော့ကီက အလုပ်မဖြစ်ဘူး…။
ခများတို့ အကုန် ရွေးကောက်ပွဲေ-ာက်ရမ်း အရေးကြီးတယ် ပြောကြတယ်…
ကျုပ် အမြင်တော့ေ-ာက်ရမ်းအရေးကြီးတာ …. ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောင်းဖို့ပဲ…။
သူများအနောက်ယှက်ဖြစ်အောင် စိကလက် မသောက်ဘူး ပဘလစ်အေရိယာမှာ မမူးဘူး ကအစ…။
ဘယ်အစိုးရ တက်တက် ဘတ်စ်ကား ရထား.. ဘူတာမှာသွားစီးရမယ်…။ လမ်းကြုံတားသလို ဖြတ်လမ်းမလိုက်ဘူး…။
လမ်းလည်ကောင်တက်စီငှားလို့မရဘူး… ကိုယ့်အတွက် သူများအနှောက်ယှက်မဖြစ်စေဖို့။
လမ်းဘေး ကွပ်ပျစ်ထိုးပြီး ရောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်အစား အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ဈေး ကပဲဝယ်မယ်။.
ခိုးကူးမရှိတော့ဘူး ဗြောင်ကူးပဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အထှာကို လက်သင့်ခံမယ့်အစား…
ကျုပ်ကတော့ အစုံနားမထောင်ဘူး ကျုပ် စုံမက်တဲ့ ဂီတအမျိုးအစား – သည်တခုကိုတော့ဖြင့် အော်ရီဂျင်နယ်ပဲအားပေးတယ်…
စသည် စသည်.. ချရေးရင် စာတမ်းတခုဖြစ်သွားမယ်…။
ထိပ်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံး မေးဖို့က … မှန်ကြည့်ပြီး နင်/ငါ က ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ဘယ်လောက် တန် တဲ့ လူလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။
(ကြည်ဆံ ကင်းမဲ့ဇုံက လာလတ္တံ့သော ရီပလိုင်းများ ကောမန့်များ ပလပ်စ် အော် မိုင်းနပ်စ်များ 100% နိုးသောက်ဂရု ပါ..)
နက်ဖြင်မနက် က ရေကြည်အိုင် မှာ မျက်နှာသစ်ရတာ ခညားတို့မှ မဟုတ်ဘဲ….။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မယုံ မရှိနဲ့
နိ တို့ အသိုင်းး အဝိုင်းး က ဦးးနှောက်နည်းးနည်းးရှိတယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ထင်တဲ့ သူမှန်သမျှ ဒီလေ ပဲ
အစိုးး ရမပြောင်းးချင်သူမှန်သမျှ ကိုယ့်ကို ကို ပြောင်းးလဲဖို့ ဇွတ်ပြောကြတာ ကြားးဖူးးတာပဲ..
ဘူးးလက် ပိတ်သတ်ဆိုမှတော့ ပြောတော့ ပါဘူးအေ… အဟွတ်..!!
@QUIL@ says: ဘယ်တုန်းက ကျုပ်…ဘူးလက် ပိတ်သတ်ဖြစ်သွားသတုံး…
မနနေ ကိစ္စရှိလို့ …မြို့ထဲ သွားမလို့ဗျာ…
ခညား … မဂိုလမ်းလိုနေရာမယ်.. အရသာရှိရှိ ပလက်ဖောင်း နင်းခွင့်ရလားဆိုတာ…
ဒမိုခွေစီ တို့ ဖက်ဒရယ်တို့ …လု့အခွင့်အရေးတို့ နောက်မှပြော …ပလက်ဖောင်းပေါ် လမ်းလျောက်ခွင့် အရင်ပေး…
အဲ့လို အစိုးရ (အားဂျန့်) လိုတယ်..
kai says: ♩♪ ♫ ♭ ♯ဘယ်သူမဆို… ကိုယ်တန်ရာပဲရမယ်..။ ♩♪ ♫ ♬
ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလလေ…။ ယူအက်စ်မှာဆို.. ကန်င်ပိန်းပြောစကား..သမ္မတလောင်းတွေအကုန်နားထောင်ရတာ..။
မဲဆွယ်ကာလ.. ကန်င်ပိန်းသမားက.. အာဏာအရှိဆုံး..။
ကန်င်ပိန်းက.. တကယ့်ပေါ်လစီနဲ့.. မဆိုင်ရေးချတယ်မှ… မဆိုင်..
အင်မတန်မြင့်တဲ့.. အနုပညာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထားးပါ
တကယ် တိုက်ရိုက်ပြောထားတဲ့ ပို့စ်ထဲ မလာပဲ
ဒီထဲ လာပြောနေထဲ က something is not right. ခုခိ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဇီဇီ တော်တော်စိတ်ပူတတ်တယ်။ ခုမှ သိလိုက်တယ်။ အမဆို အိပ်ခါနီး အိမ်တံခါးတောင် သော့မခတ်ဘူး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမရယ်
မြစပဲရိုး says: အမေရိကား က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ သူ့တို့ ရပ်ကွက်က အိမ်ကို ဒီ အတိုင်း တံခါးဖွင့်ထားခဲ့ လဲ ရတယ် ဆိုဘဲ။
နေရာတိုင်းတော့ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။
အမေတို့ အိမ်ကိုလဲ သော့ခတ်ထားဖို့ ပြောရတာ အပါတ်တိုင်းဘဲ။
အဒေါ်ကတော့ ပြုံးပြောသလိုဘဲ ငါတို့ နယ်တွေက ဒီလောက်မဆိုးပါဘူးတဲ့။
ဒါပေမဲ့လဲ ဒီအချိန်မှာတော့ သတိလေး နဲ့ နေပါပြုံးရေ။
ဒါအပြင် အိမ်တွင်း က ချစ်လှစွာသော အကူအညီဖော်လေးများ ရဲ့ ရန် ကိုလဲ သတိပြုဖို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆင်းးရဲခြင်းး လမ်းးဆုံးးရင် ဘာမဆို လုပရဲ ကြပြီ
ဆင်းးရဲအောင်းးထားးတဲ့ အစိုးရကို အပြစ်မပြောကြပါနဲ့…
အားးလုံးးကို ရဲရင့်အောင် ထားးတာပါ
အဘ ဒို့ သက်ကျော် ရာကျော် ရှည်ပါဇီ
အာ့ မှ တစ်ယောက်သောသူ စိတ်ချမ်းးသာတော့မှာ :P
kai says: အမေရိကားက.. အိမ်တွေအကြမ်းအားဖြင့်လုံခြုံပါတယ်..။
အခြေခံဥပဒေပြောင်းနိုင်မယ်ဆို.. လူတိုင်းသေနတ်ကိုင်ခွင့် ပြဌာန်းလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
မြန်မာ့လူဦးရေ.. ပိစိလေးမှာ.. ဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာက.. မဟာ့လူဦးရေးနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ…။
ဘာမှသိပ်ပြီးထူးလာမယ်မဟုတ်..။ လူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုများလာတာ အမြတ်ထွက်မှာပဲ..။
မြန်မာဆိုတာ.. အရင်ဗီဇမှာကထဲက.. စစ်သွေးစစ်မာန်သိပ်ထသူတွေ..။
၁။ ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေး အပြတ်ခွဲထုတ်..။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန..။ မဟနဖျက်သိမ်း..။
၂။ လူတိုင်းလက်နက်ကိုင်နိုင်ခွင့်..။ ကိုယ့်ပိုင်နက်ထဲမှာဆို.. လူစိမ်းကို ပစ်သတ်ခွင့်…။
အဲဒါလေးနဲ့စရင်..လက် ၁၀ချောင်း၁ခါ နှစ်ထဲနဲ့.. မြန်မာပြည်.. ထိုင်းကိုကျော်မယ်လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၁ နှစ် အတွင်းး
ကိုယ့်ချင်းးချင်းး ပစ်နေကြမှာနဲ့ လူမျိုးးတုန်းးမယ့် အဖြစ် မရောက်ဘူးး လို့ အာမခံလားးး
Ma Ma says: ဒီတိုင်း ဒီပြည် ဒီလူတွေနဲ့ လူတိုင်းသေနတ်ကိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စက္ကန့်မလပ် သရဏဂုံတင်နေရမယ်။
စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ ယဉ်ပါးနေကြတာဆိုတော့…………… Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: တိုက်ခန်းဆိုတော့ လူအဆင်းအတက်တော့ ရှိပေမယ့် မြေညီထပ်လှေကားနားမှာက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် ၊ ဟိုဘက်ဘေးက ထမင်းဆိုင် ၊
လူစိမ်းတက်ရင်လည်း မြင်တယ်ပေါ့လေ ၊
ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်လာရင် ခံရမှာမို့ အပြင်သံပန်းတံခါးကို မမချွိအကြံပြုချက်အရ သော့ခတ်ထားပါကြောင်း
မတော် ကျုပ်ရတနာလေးတွေ ဒုက္ခရောက်မှ အခက်ဗျ ၊ ရတနာဆိုတာ သမော်ဒီးလေးတွေကို ပြောတာပါ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: သံပန်းတံခါးကို အမြဲသော့ခတ်ပြီး သစ်သား တံခါးအဖွင့်အပိတ်နဲ့ပဲ စကားပြောကြပါနော်။
တတ်နိုင်ရင် ချောင်းကြည့်ပေါက် ဖောက်ပြီး သင့်တော်သူမှ တံခါးဖွင့်ပေးပါ။